ILEEN WAA CIYAAL CA WEYN! In uu sameeyey Group Whatsapp ah oo ay ku wada jiraan ciyaaryahanada Barca iyo Real, sida uu uga MISEERI jiray marka ay badiyaan sanadkii hore iyo sida uu hadda Group-ka ugu karbaasho! Gerard Pique oo wax badan oo kaa qoslin doona wareysigan ku bixiyey! – Gool FM
(Catalonia) 22 Mar 2018. Gerard Pique waxa uu daaha ka rogay sida ay isaga xaraabeystaan xiddigga ee ay El Clasico isku xifaaliyaan.
Daafaca Barca iyo Spain waxa uu sheegay sida ay uga xumaan jireen markii ay Real Madrd wax walba ku guuleysaneysay kal hore iyo sidii ay ciyaaryahanadeeda u dabaaldagi jireen!
Hadda ayuu uga aargudana Whatsapp Group oo uu isagu sameeyey!
Pique waxa uu u warramaya The Player’s Tribune .
“Xog yar oo gudaha ah ayaan idin siinayaa.
“Qof walba wuu garanayaa in ciyaaryahanada ay leeyihiin qol Whatsup-ka ah oo farrimo la’isaga diro. Hal waxaan leeyahay saaxiibadeyda xaafadda iyo mid kale oo saaxiibadeyda Barca ah. Laakiin kana an ugu jeclahay wuu kaa yaabin doonaa.
“Bilowgii ol’olehan, markii aan sideed ama sagaal dhibcood ka horreeynay Real Madrid horyaalka, waxaan bilaabay qol gaar ah oo ay ku jiran saaxiibada Real Madrid ee xulka qaranka iyo Barcelona.
“Wax kaliya aan qolkaas ku sameyno waa in aan isaga booleysanno anaga oo ka hadleyna Barca iyo Real! – Waxaan nahay sida carruurta yar yar.
“Run ayaa ah, gaar ahaan aniga waxaan hadda waan faraxsanahay, maxaa yeelay 15 dhibcood ayaan ka sarreynaa Real horyaalka. Markaa jawaabaha aan bixiyey hal abuur ayaan ku ahay
“Xilli ciyaareedkii hore, markii ay wax walba ku guuleysanayeen xarfaanta Real, waxa ay dareemayeen wanaag. Wax xun ayey si joogta ah noogu sheegayeen markii aan ku aragno tababarka xulka qaranka.
“Mar walba oo ay kulan badiyaan xilli ciyaareedkii hore, waxa ay soo dhigayeen sawirro ay qaarka sarre u qaawan yihiin Instagram-ka iyaga oo ku jira qolka labiska. Wey dhoolla cadeenayeen iyaga oo murqohoodu muuqdo sida dhagaxa oo dhahaya #HalaMadrid iyo sawirro callaamada koobka ah.
“Xilli ciyaareedkan, walow ay xaaladda sii ka duwan tahay. Sawiradda Instagram-kooda oo dhan waa kuwo ay masaakiin u egyihiin ‘Saddexda dhibcood ee maanta. Waa in aan sidaas shaqo adag u sii qabanaa!’
“Markaa Whatsup-ka ayaan fariimo ugu diraa. ‘Haye akhiyaareey, maxaad isla adkeyneysaan? Kaddib waxaa raaciyaa callaamadaha oohinta iyo mid qosol ah.
“Xittaa magic gaar ah ayaan u bixiyey qolka. Waxaa la dhahaa: ‘HAMBALYO!’
Iska ilow 'Special One' , - Jose Mourinho oo NAANEYSTAN cusub isku bixiyey!
Majalladda Daiyl Star: Shaxdan 11-ka ah ayey ka dhigtay kuwii ugu fiicnaa ee soo maray taariikhda Premier League ee ciyaaryahanada aan u dhalan England - Eeg oo noo sheeg in aad ku raacsan tahay, ku diidan tahay, ku dar oo ka siib mid ka mida ciyaaryahanada